WOWOW 8 chlọ Wlọ chlọ chlọ Mgbasa Ozi N'ụlọ Faucet Matte Black
Home / Ime ụlọ ịsa ahụ / Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ / WOWOW Black Bathroom Faucet with Separate Handle Swivel Spout
WOWOW Black Room Faucet with Separate Handle Swivel Spout
gosiri 4.91 nke 5 dabeere na 23 ahịa Fim
Ngwongwo ọla siri ike ka nke ọma karịa ndị ọzọ
Enweghị mkpa inwe nchegbu banyere nchara, mbibi okwu.
Ngwa dị elu, ịdị mfe nke mmezi, ntụkwasị obi dị elu, ogologo ndụ.
Ntụziaka nwụnye 2320300B
Chohọrọ mmiri ịsa ahụ gị 2320300B
Mgbe ị na-emebe ma ọ bụ na-edegharị ụlọ ịsa ahụ gị, ị gaghị eleghara mmetụta nke mmiri ịsa ahụ. Eleghị anya, ihe ndị a bụ obere ihe dị na ime ụlọ ịwụ ahụ, mana na-aganụ na ha bụ isi ihe na-elekwasị anya na ime ụlọ ịwụ ahụ. Onye ọ bụla batara n'ụlọ ịsa ahụ gị, na-elebanye anya na ntanetị ụlọ ịsa ahụ na mbụ. Ya mere, ọ dị oke mkpa na ịhọrọ akwa mmiri nke ụlọ ịsa ahụ gị nke ọma. Falọ ịsa ahụ na-abịa n'ọdịdị dị iche iche. Chohọrọ ụlọ ịsa ahụ dị mma nwere ike isiri ụfọdụ ndị ike. Igwe mmiri ịsa ahụ dị mma nwere ike inye ụlọ ịsa ahụ gị nke emetụtara ya n'ezie. Ọ nwere ike me ka ntụpọ zuru oke na ọdịdị ụlọ ịwụ ahụ gị. Mana nke kachasị, ụlọ ịsa ahụ ga-adaba na ụdị ụlọ ị na-asa ahụ. N'ihi ya ị nwere ike ịtụle akụkụ niile nke ụlọ ịsa ahụ ịsa ahụ ị na-achọ ịhọrọ. Agbanyeghị, echefula na imebe ma ọ bụ imezigharị ụlọ ịsa ahụ gị bụ ihe omume niile na-atọ ụtọ. Nwere ike ịhazi ụlọ ịsa ahụ ọhụrụ gị ka ọ masịrị gị. Ya mere, ka anyị nyere gị aka na nkecha ụlọ ime ụlọ ịwụ ọmalịcha mmiri ojii.
Stzọ ịsa ahụ nke mara mma jupụtara na mmiri
Isi ihe dị iche na etiti mmiri ịsa ahụ juru ebe niile na ndozi ndị ọzọ, bụ ọnọdụ nke ejiri aka, ma ọkụ ma oyi. N'ime mmiri ịsa ahụ zuru ebe niile, ejiri aka ya n'akụkụ akụkụ ọ bụla. N’ime ebe a na-edobe etiti iji mepụta ọmụmaatụ, ị na-eji otu oghere gbajiri agbapụta n’ime ebe a na-asa ahụ. N'aka nke ọzọ, iji otu oghere mmiri dị ka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji naanị otu njikwa mmiri ọkụ na mmiri oyi. N'aka nke ọzọ, na mmiri ịsa ahụ jupụtara ebe niile ị ga-egwu mmiri atọ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ ma ijikwa aka abụọ dị iche iche maka ma mmiri ọkụ ma oyi. Nke a na - eme ka ọ dịkwuo mfe ịchịkwa mmiri mmiri nke ọma. Họrọ ụdọ mmiri ịsa ahụ zuru ebe niile, a na-enye gị ọtụtụ nhọrọ na imecha. Nwere ike iji ụzụ ojii na-acha odo odo nwee mmetụta dị egwu. Nke a ga - eme ka mmiri ịsa ahụ zuru ebe niile mee ka ọ bụrụ ihe na - adọrọ adọrọ n'ime ụlọ ịsa ahụ gị. Na mgbakwunye na uche gị ga-ahọrọ arụmọrụ. Kedu ihe ị chọrọ ka mmiri ịsa ahụ na-acha oji na-eji oji ojii mee? Mgbe ị na-ahọrọ, dị họrọ ahịrị mmiri ịsa ahụ zuru oke ojii ka ọhụụ ahụ maka ime ụlọ ịsa ahụ ọhụụ.
Black ime ụlọ ịwụ ahụ zuru ebe nile
Black nwere ike ịbụ nhọrọ dị egwu na ihe ndozi ụlọ ịsa ahụ gị. Karịsịa mgbe enwere ihe ojii ojii ọzọ na ime ụlọ ịwụ ahụ. Nwa mmiri ịsa ahụ zuru ebe niile ga-agwakọta enweghị nke ọma na ihe ndị ọzọ eji achọ ime ụlọ ịwụ ahụ. O doro anya na ị nwere ike ime mgbanwe site na mmiri ọmalịcha ụlọ ịsa ahụ na-acha oji juru ebe ị na-asa ahụ. Nke mbụ n'ihi na mmiri ịsa ahụ ojii juru ebe niile pụrụ iche. Ebe ọ bụ na ọ bụghị ọtụtụ ndị mmadụ na-amaja iji ụdị ike a na ime ụlọ ịwụ ahụ, ị ​​nwere ike ịpụ iche nke ụlọ ịsa ahụ nke ojii nke WOWOW. Ọ bụghị na nke ikpeazụ n'ihi na ọ na-enye echiche a ebumnuche ebumpụta ụwa gị na ime ụlọ ịwụ ahụ zuru oke ọ bụghị ileda anya. Bathroomlọ ịsa ahụ gị ga-anọrịrị n ’ụlọ ọkọlọtọ na pọpụl ojii juru ebe nile na WOWOW. N’enweghị mgbagha, onye ọ bụla hụrụ ihe dị iche iche e kere eke nke ime ụlọ ịwụ, ga-eju ya anya. Ma ọ bụghị na ebe ikpeazụ n'ihi jụụ ojii zuru ebe ịsa ahụ ịwụ ahụ ị họọrọ.
Tupu usoro ị ga-eburu ngwa ọrụ. Kedu ebumnuche ụlọ ịsa ahụ mara mma nke na-anaghị egboro gị mkpa gị? O doro anya na ị ga-ekpebi otu ịchọrọ ka akụrụngwa ụlọ ịsa ahụ gị wee mee ihe ọ bụla. Yiri akụkụ imewe, ụlọ ịsa ahụ dị obere nwere nnukwu mmetụta. Nke ahụ doro anya na-emetụta ọrụ arụmọrụ.
Ijikọ mmiri ịsa ahụ nke ọma
Uclọ ịsa ahụ WOWOW ojii ojii zuru ebe nile kwesịrị ekwesị maka ọtụtụ ime ụlọ ịwụ ahụ. Mana ọ kwesịrị ịbụ otu akụkụ akụkụ ndị ọzọ nke ime ụlọ ịwụ ahụ gị. WOWOW mere nwere mgbakwunye ojii ụlọ ịsa ahụ, dịka ọmụmaatụ faucets ojii, mmiri ịsa ahụ ojii na pọmpụ mmiri ojii. N'ụzọ dị otu a, ị nwere ike ịhazi ụlọ ịsa ahụ gị ọzọ na nkụ mmiri ojii ndị ọzọ. Ga-eme ka enwe mmetụta buru ibu na ya! Na mgbakwunye, mmiri ịsa ahụ ojii zuru ebe nile nke WOWOW ga-enye gị ọrụ ịchọrọ. Ezubere ụlọ ndozi ụlọ a na -ekezi ojii ka ọ dị iji mee ụlọ ịsa ahụ ọhụụ, nke pere mpe, ma bụrụkwa nke ugbu a. Agbanyeghị akwa mmiri ime ụlọ a na-acha ọcha na WOWOW bụ ma chara acha na ọkaibe. Ihe eji eme ihe eji eme ka ihe eji eme ihe bu ihe edebere, ma n’enye gi nke oma. Onye ọ bụla hụrụ ụlọ mmiri a na-ahụ n'anya na-acha odo odo ga-eju ya anya site na imewe ya na arụmọrụ ya. Ejiri ọhụụ doro anya ma bụrụkwa ihe mere ya. Igwe mmiri ịsa ahụ zuru oke maka ebe ị na-asa mmiri, dị ka ọ dị na ngwaahịa ya niile, WOWOW na-eji akụrụngwa kachasị mma maka akwa mmiri ịsa ahụ. Ga-ahụ nke a dịka ịmaatụ mgbe ị na-eji aka a na-adọba mmiri. Omume ahụ na-ekwe nkwa nkwụsi ike na ogologo ndụ. Emebere oghere ahụ dị elu dichapụrụ iche n'ụzọ dịka ọmụmaatụ ọduda adịghị agbasasị n'ihi ogologo ya. Elu mmiri nke ụlọ ịsa ahụ juru ebe niile dị oji, ma ọ bụ ọla. Ngwongwo ọla siri ike bụ n'ezie nhọrọ dị mma ma e jiri ya tụnyere ihe ọla ndị ọzọ. Ikwesighi ichegbu onwe gi banyere ihe atụ corrosion. Ya mere, onodu nke ugba ahihia a na-adi oji di ichebara n’ebe nile n’iile. E wezụgakwa, elu ahụ bụ mgbochi asachapụkwa, yabụ, ị ga - ekwe gị nkwa ọhụụ ihu ogologo oge. Igwe mmiri ịsa ahụ na-eji oji ojii zuru oke maka ime ụlọ gị ga-abụ mmetụ ahụ zuru oke maka imewe ụlọ ịsa ahụ gị.
Nnukwu mmiri ịwụnye ojii ejiri wụnye futeti
OWlọ ịsa ahụ ojii na-acha uhie uhie WOWOW dị mfe iji wụnye ya na ntinye ngwa ngwa ya. Enwere ike ijikọ mmiri oyi na mmiri ọkụ na njikọta ngwa ngwa. For ga-achọ olulu atọ nke “1” -1.5 ”ma ebe ịsa ahụ ga-adị 0.2” -1.2 ”. OWlọ ịsa ahụ WOWOW ojii zuru ebe nile nwere ike ịtọlite ​​4 ruo 16 nke anụ ọhịa ọ bụla, naanị dabere n'ụkpụrụ gị. Dị ka ụdọ mmiri ụlọ mposi ojii juputara na-adịkwa mfe iji dozie ya, WOWOW anaghị atụ egwu ịnye akwụkwọ ikike afọ 5 na ngwaahịa ya. Ekpuchita ihe ahu bu ubochi 90 nke enyepuru ego ya. WOWOW tụkwasịrị obi na ya ụlọ ịsa ahụ ojii zuru ebe niile ma nwee ike nwee naanị afọ ojuju ndị ahịa 100%! Uru nke WOWOW Black Room Woole Faucet na obere okwu:
 Na-enye ụlọ ịsa ahụ mara mma
 Ngwakọta pụrụ iche nke kpochapụwo na nke ọgbara ọhụrụ
Ọ dị mfe ijikọta ya na akwa mmiri ndị ọzọ
Na-enye arụmọrụ kachasị mma nke dabara na mkpa gị
Jikọtara esthetics na arụmọrụ dị elu
Materials Ihe eji eme brass quality..
 Ọ dị mfe ihicha ma dị mfe ilekọta
Warranty akwụkwọ ikike afọ 5
kichin foset na dọpụtaara sprayer
kichin foset ịgba isi
kichin foset wedata
SKU: 2320300B Categories: Ime ụlọ ịsa ahụ, Aka mmiri ịsa ahụ awara ugboro abụọ Tags: Black, Aka Iche, Aka abuo
Ngwaahịa na-ekwu maka onwe ya. Ntinye ya siri ike karịa nke ọma n'ihi igba ochie ochie. O were ogologo oge ịwepụ ya mana mgbe nke ahụ gasịrị ihe niile gara dịka e siri chọọ. Lelee foto ndị ahụ, dịka m kwuru, ngwaahịa a na-ekwu maka onwe ya
Nwere ike ghara ịga na-ezighị ezi na nke a set! Ha na-eme nke ọma ma na-arụ ọrụ dị arọ nke ọnụahịa m na-atụghị anya ya. Anyị lere anya na Home Depot na Lowes maka ọkpọkọ mmiri ojii nke mbụ. Ọ dịghị nke dịkarịrị ka ọmarịcha ma ha niile dịkarịa ala okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ. Anyị nwere afọ ojuju maka otu a!
Ngwaahịa dị ukwuu maka uru ahụ, ị ​​gaghị ama na nke a dị n'okpuru $ 100. Ọ dị mma ma mara mma ma enwere m mmasị na mmecha. Na-adaba n'ụzọ zuru oke na ime ụlọ ịwụ m ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Kpamkpam hụrụ nke a foset! Nice & arọ na a ezi uche price! Arụrụ ọnwa 4 gara aga & enweghị nsogbu. Ngwunye ojii mara mma jikọtara ngwa ngwa ịsa ahụ anyị ọzọ n'ụzọ zuru oke.
N'ezie dị ka anya na ọkpọkọ mmiri na mgbanaka ma ọkpọkọ mmiri na-agba agba na-agbanye agba. M weghachitere nke mbụ m zụrụ n'ihi na ọ gbanwere agba ọcha-ish mgbe anyị jesịrị ya na nke mbụ. Anyị natara nnọchi na nke abụọ mere ya. Enwere m nsogbu nke ukwuu. M hụrụ n'anya nke ihe ndozi na anyị ọhụrụ ụlọ ịwụ ma enweghị ike ịchọpụta ihe na-aga na stopa. Anyị anwalela nsí ezé dị iche iche na ncha dị iche iche iji hụ ma ọ nwere mgbanwe na ọ nwebeghị. Anyị anwalela ihe nhicha dị iche iche yana Ime anwansị iji gbalịa hichaa ha mana ọ nweghị ihe na-enyere aka na ịchọpụta ihe. Aga m enyela kpakpando 5 a ma ọ bụrụ na nke a anaghị eme na mkpuchi ihe mkpuchi!
Ogo nke ọkpọ a na-asa ahụ dị egwu. Enwere m ike ịgwa ya na emere ya nke ọma ma rụọ nnukwu ọrụ. M lere anya ebe niile maka ụdị ụlọ ịsa ahụ, ma ọ dịghị onye n'ime ha ebe ọ bụ na ọ dị ka nke ziri ezi nke ga-adaba na ime ụlọ ịsa ahụ m. Ahịa na ụlọ ahịa ndị ọzọ dị oke ọnụ karịa nke a. The nwụnye usoro doro anya na ihe niile na-aga dị ka ọ na-iche. Usoro a na-aga nke ọma ma dịkwa mfe. Ihe mkpofu mmiri bụ ihe dị mma iji tinye n'ime setịpụrụ. Agba bụ kpọmkwem agba m na-achọ. Ime ụlọ ịwụ ahụ na-apụta nke ukwuu n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Ekwadoro m onye ọ bụla ngwaahịa a ma ị ga - eche n'eche na ọ bara uru ọ bụla ị zụtara ya.
Ruo ugbu a, dị nnọọ ukwuu! O were di m oge ole na ole iji wụnye abụọ n'ime ndị a mana ọ bụ naanị n'ihi na ihe ndozi ndị dị ugbu a siri ike iwepụ. Ahuru m na ihe nhicha nke… mere ka odi nfe maka umuaka. Ihe ndozi ahụ bụ nwa ojii dị ka akọwara na ihe bara uru maka ihe ị nwetara. Ọ bụrụ na ihe agbanwee, aga m emelite nyocha a.
Obi dị m ezigbo ụtọ na ọdịdị, ọrụ na ogo nke otu ọkpọkọ mmiri. Ọgwụgwụ mara mma. Ihe niile banyere setịpụrụ gụnyere nkwakọ ngwaahịa mara ezigbo mma karịa ọnụahịa 'ndị na-ewu ụlọ' dị ọnụ ahịa e rere na Lowe's na Home Depot.
Anụmanụ na-adị oke mma na ihe efu anyị nke anyị zụtara nke nwere oghere atọ gbubiri na marble countertop. Di m tara ahụhụ si ọnwụ banyere otu ọ dị mfe iji wụnye, dị mfe karịa ọtụtụ. Ọ dị mfe na ọ gwara m ka m zụta nke abụọ maka ụlọ ịsa ahụ ọzọ anyị na-emegharị ugbu a. M mere! Ọ mara ezigbo mma ma nwee ibu arọ na ya, ọ bụghị ihe ọ bụla.
Emelitere ime ụlọ ịwụ na na usoro anyị ghọtara na ochie anyị foset ama nchara. Anyị wụnyere ọwara mmiri ojii ọhụrụ ọ dịkwa ịtụnanya! Ọ dị ka ezigbo, ọ dị mfe ịwụnye, na m hụrụ ntanye / mmapụta mmiri!
Igwe mmiri a mara mma. O guzoro ogologo ma o bughi oke. Ọ bụ sturdily mere. Ọ na-adị ọnụ ala ma ọlị. Nke a bụ nnukwu uru na ngwaahịa dị mma.
R *** e2020-08-01
Wụnye nke a na ime ụlọ ịwụ nwa m nwanyị ma ọ rụọ ọrụ mara mma. Mfe iji wụnye, na-ele anya ma na-arụ ọrụ dị ukwuu. Ugbua nwere atụmatụ ịzụta ọzọ ma dochie ihe eji achọ ụlọ ịsa ahụ ndị ọzọ na otu.
Zụta nke a maka ime ụlọ ịsa ahụ. Kemgwucha ezigbo ọkpọkọ na ọnụahịa zuru oke. Ọ bụghị onye na-akwado popup drains mana ọ bara uru maka ogo na ọnụahịa a.
Mgbe ịzụ ahịa na nnukwu igbe mmezi ụlọ mma, di m hụrụ ndị a fixtures na Amazon na ha dị ihe dị ka ọkara price nke ndị na-echekwa. N'ịbụ onye cheapskate nke m bụ, enwere m obi ụtọ ịchekwa ego, ọkachasị mgbe nyocha ahụ dị oke mma. Ihe ndozi a bụ ihe atụ nke ị ga-enweta karịa ihe ị kwụrụ. Ihe a haziri mara mma ma nkwakọ ngwaahịa ahụ dị mma - ọ dịka nchekwa nke elu dịka nne na nna na-eme nwata. Naanị ihe na-adịghị mma bụ na otu n'ime njikwa na-emecha nwee ntakịrị ihu ala na ya. Nyere nkwakọ ngwaahịa ahụ niile, ọ bụ ihe ijuanya ịhụ ndị a mana ikekwe QC na-ehi ụra na ọsọ ahụ. Ọfụma na ezughị okè dị n'akụkụ azụ yabụ na ọ nweghị onye ga-ahụ ha belụsọ ma ọ bụrụ na m hulata olu m n'akụkụ na-ekwekọghị n'okike. Anyị enweghị oge iji zipu ntọala ahụ. Igwe mmiri ahụ dị ogologo ma e jiri ya tụnyere ọtụtụ ọkpọka ime ụlọ ịwụ nke dị mma iji jupụta ọkpọka toro ogologo. Anyị ga-akwado ndị ahịa a ngwaahịa a.
Azụrụ m nke a maka ụlọ ịsa ahụ anyị ga-emegharị n'ọdịnihu, yabụ achọghị m itinye nnukwu ego na ya, yabụ kama ịzụta ezigbo mma mmiri Moen ma ọ bụ Delta dị ka m nwere n'ime ime ụlọ ịwụ ndị ọzọ, azụrụ m nke a otu. Amaghị m na m ga-enweta ọkpọka ka mma maka ọkara ọnụahịa ahụ! Njikọ niile (ma e wezụga ngwa ngwa njikọ ngwa ngwa) bụ ọla. Ọ bụghị anwụ-igba metal ma ọ bụ chrome acha plastic- ọ bụ a metal foset na metal oyiyi akwa na njikọta. Nke a abụghị ikpe na adịchaghị ika faucets na ugboro abụọ na price. Ọdịdị dị mma, imewe ahụ dị mma ma dịkwa mfe ịwụnye, njedebe na-adịgide adịgide ma na-eguzogide ọgwụ. Ọ ghọwo ọkpọkọ ụlọ ịsa ahụ kachasị amasị anyị n'ụlọ. Ejiri ya ma chebe ya nke ọma na ọnọdụ ọ bụla mgbe ọ bịarutere. Naanị ihe na-adịghị mma m nwere ike ikwu bụ ntuziaka nwụnye nwere ike ịmatakwu ma enweghị nkọwa. Wezụga nke ahụ, nke a bụ n'ezie ezigbo ịzụrụ- mgbe oge ruru iji dochie ihe ndị ọzọ m ga - achọ ga - achọ ndị a kama ịkwụ ụgwọ maka nnukwu ụdị aha. Ukwuu na-atụ aro.
Zuru oke! M na wụnye ihe ọ bụla dị ka nke a n'ihu, na m n'aka na ọ were m obere oge n'ihi na ọ bụ oge mbụ m mere ya- ma n'ezie na ọ bụghị kwa ike na-eme site onwe m! Ihe kacha sie ike iwepụ ihe ochie ahụ. Na ezigbo obi ụtọ na ọkpọkọ mmiri a zuru ebe niile.
Zuru oke! M na wụnye ihe ọ bụla dị ka nke a n'ihu, na m n'aka na ọ were m obere oge n'ihi na ọ bụ oge mbụ m mere ya- ma n'ezie na ọ bụghị kwa ike na-eme site onwe m! Ihe kacha sie ike iwepụ ihe ochie ahụ. Na ezigbo obi ụtọ, m gbanwere ọkpọkọ ime ụlọ ịwụ 3 na ndị a. Ọ dị mfe ịwụnye ma ọ bụrụ na oghere gị bụ oke aka, ọ bụghị m. Echere m na ha niile bụ otu. Ozugbo m gbapuru oghere m, enweghị m nsogbu. Ha na-anọdụ ala karịa igwe dị elu nke na-enye ọdịdị nke nnukwu nsị. Ha anaghị agbatị karịa ndị m nwere.
O *** h2020-08-09
Anyị zụtara ihe efu ọhụrụ nke jiri pipụ "n'efu", ọ dị ọnụ ala yabụ anyị kpebiri ịzụta ihe kama. Anyị gara nnukwu igbe ụlọ na-echekwa ụlọ ahịa na ihe niile dị oke ọgbara ọhụụ na-achọ uto m na ihe dị ka $ 150. Anyị kpebiri ịlele na ntanetị wee chọta nke a maka ọkara ọkara ihe anyị gaara akwụ. Ọ mara mma nke ukwuu na tebụl zinc anyị ma nwee mmetụta siri ike.
Ọ bụghị ịkpa ókè megide okike m, ma ọlị, mana m bụ nwanyị chọrọ iji dochie ụlọ ịsa ahụ m na ọkpọkọ mmiri, naanị m. Azụrụ m pọmpụ mmiri a, mepee ya na n'ime nkeji iri anọ na ise, arụnyere ya na igwe ọhụrụ m. MGBE MGBE !!
U *** k2020-08-12
Ihe ndị a bụ ezigbo pọmpụ m wetara. Anyị na-emegharịrị, azụrụ m ndị ọzọ "aha ụdị" mana ọ bụrụ na m nwetara ihe ndị a niile. Ha chere banyere ihe niile! Ngwaahịa dị elu. Zụrụ ihe ndị a na ị gaghị akwa ụta.
Azụtara m abụọ n’ime ihe ndị a maka ịsa ahụ onye nwe anyị. Enwere m obere okwu na otu n'ime usoro ahụ mana ụlọ ọrụ ahụ lekọtara ya bey laghachi na enweghị nsogbu ọ bụla. Obi dị m ezigbo ụtọ na ogo na obere ntakịrị vintage nke setịpụrụ ha na-aga nke ọma na ihe ndozi anyị.
Igwe mmiri a nwere ọfụma mara mma. Ahuhu nke eriri mgbatị ahụ na-anọdụ ala ka ọ nwee ohere maka ịsa aka gị. Akụkụ igbapu gụnyere, dịkwa oke.
A mara mma mara mma ọkpọkọ. Ha dị oke egwu na ihe efu m. Otu n'ime mmiri pọmpụ na-efu efu, ndị ahịa na-azaghachi ozugbo na ha na-eziga otu.
WOWOW Bathroom Sink Faucet 4 Inch Center oil Ru ...
WOWOW Matte Black Room Room Faucet 4 Inch Centerset
WOWOW Vessel Sink na-akụda Black Black